श्रीमानलाई ढाँटेर विवाहित डाक्टरसंग प्रेम, डाक्टरले लगाइदिए वि’षको इन्जेक्सन त्यसपछि…. – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/श्रीमानलाई ढाँटेर विवाहित डाक्टरसंग प्रेम, डाक्टरले लगाइदिए वि’षको इन्जेक्सन त्यसपछि….
काठमाडौ । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण एक महिलाले अनाहकमा ज्या’न गु’माउनु परेको छ । श्रीमानलाई ढाँटेर प्रेमीसंग गएकी एक महिलाको नि’धन भएको छ । विवाहित महिलाको एक डाक्टरसंग प्रेम थियो । ति डाक्टर पनि विवाहित थिए । तर ति डाक्टरले भने प्रेमको नाटक मात्र गरेका थिए ।
भारतको गाजियाबादमा, प्रहरीले सेप्टेम्बर ७ मा डा’स’ना क्षेत्रबाट हराइरहेकी एक महिलाको खोजी थालेपछि यस्तो र’हस्य खुलेको हो । डाक्टर प्रेमीले महिलालाई प्रेमको नाटक गरे । उनलाई नोएडा लगे र त्यसपछि वि’षा’लु इन्जेक्सन लगाइदिए । सुई लगाएपछि ति महिलालाई चण्डीगढ़ लिएर गएको समेत खुलेको छ ।महिला हराएको लामो समय पछि उनको फोनको अनुसन्धान गर्दा ति महिला उनै डाक्टरसंगको सम्पर्कमा रहेको खुलेपछि प्रहरीको अ’नुस’न्धानको घेरामा ति डाक्टर आएका थिए । अहिले ति डाक्टरलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ ।
सेप्टेम्बरमा ७ मा ३१ वर्षीया महिला शबाना पत्नी यामीन गजियाबादको मसुरी क्षेत्रबाट ह’राएकी थिइन् । ह’राएको महिलावारे मसुरी पुलिस स्टेशनमा खोजीका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो। प्रहरीले उक्त महिला डाक्टर इस्माईलको सम्पर्कमा रहेको थाहा पाएपछि प्रहरीले स्माइललाई प’क्राउ गरेको हो ।
त्यस्तै,बलिउडकी हाँस्य क्वीन् भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचियाको घरमा खुशीयाली आउने भएको छ । यो खुशियाली अरु अरुभन्दा निकै नै ठुलो र महत्वपुर्ण छ । किनभने भारती आमा बन्ने भएकी छन् । यस कारण भारती र हषै चाँडै नै बन्दैछन् आफ्नो बच्चाको अभिभावक ।
आफु क्युट एउटी परीकी आमा बन्न चाहेको कुरा भारतीले नेशनल टेलिभिजनमा गरिन् खुलासा । भारतीले यो कुराको खुलासा एउटा रियालिटी कार्यक्रममा गरेकी हुन् । जहाँ उनका पति हर्ष पनिसंगै नै थिए । यी दुवैले एउटा रियालिटी सोलाई यतिबेला होस्ट गरिरहेका छन् ।
सोही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा भारती र हर्षले एउटा रोमान्टी गीतमा आफ्नो परर्फमेन्स दिएका थिए । उक्त गीतमा उनीहरुको डान्स सकिएपछि भारतीले आफ्नो हातमा रहेको प्रपलाई देखाउँदै भनेकी थिईन्,‘अहिले त मेरो हातमा यो डमी छ । तर २०२१ मा भने मेरो र हर्षको रियल बेबी मेरो हातमा हुनेछ ।’ उनले अगाडी भनिन्,‘यदि अर्को पटकको शो हामीले नै होस्ट गर्ने मौका पायौं भने सायद त्यतिबेला हाम्रो हातमा डमीको साटो आफ्नै बेबी हुनेछ ।’
भारतीको यो कुरामा समर्थन जनाउँदै हर्षले पनि आफ्नो पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी नै भएको ईच्छा व्यक्त गरेका थिए । भारती र हर्षको यो कुरा सुनेर सबैले भारती आमा बन्दै छिन् भन्ने कुराको सजिलै अनुमान लगाएका थिए । र उनीहरुलाई शुभकामना पनि व्यक्त गरेका थिए ।
पाकिस्तान बिमान दुर्घटना : पाईलटले कन्ट्रोल रुमसँग अन्तिम कुराकानी के गरेका थिए (अडियोसहित)
नेपालभित्रै प्रवेश गरेर न्युज २४ कर्मीको क्यामेरा खो’स्यो, प्रहरीमाथि पनि हा’तपा’त
कोरोनाबाट जापानी अभिनेत्रीको निधन
अमेरिकामा लकडाउनवि रुद्ध ब न्दुक बोकेर प्र दर्शन, ट्र म्पले गरे स मर्थन